Angel Di Maria Oo Seegay Kulanka Paris Saint-Germain Iyo Barcelona
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Angel Di Maria oo seegay kulanka Paris Saint-Germain iyo Barcelona
Paris Saint-Germain ma awoodi doonaan in ay helaan Angel Di Maria kulanka Champions League ee wareega 16ka lugta hore la Barcelona Talaadada soo aadan.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa dhaawac muruqa ah ka soo kabsaday ka dib kaliya 11 daqiiqo kulankii Le Classique ee ay la ciyaareen Marseille Axadii, waxaana lagu bedelay Pablo Sarabia iyadoo PSG ay 2-0 uga badisay kooxda ay xafiiltamaan.
Kooxda heysata horyaalnimada Faransiiska ayaa wajahay xaalad cabsi ah oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca Di Maria, tababare Mauricio Pochettino ayaa haatan xaqiijiyay in ciyaaryahanka ay isku dalka yihiin uu ka maqnaan doono safarka ay ku tagayaan Camp Nou.
Isaga oo la hadlaya wariyaasha, Pochettino ayaa yidhi: “Haa, way dhamaatay in Angel Di Maria [uu ciyaaro kulanka Barcelona]. Waxaan markale la xiriiri doonaa todobaad gudihiis si aan u aragno halka aan joogno.
32 jirkaan ayaa weli ah ciyaaryahan muhiim u ah kooxda heysata horyaalka Ligue 1, waxaana uu leeyahay shan gool iyo 12 caawin tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan – oo ay ku jiraan caawinta Kylian Mbappe kulankii furitaanka ee Marseille ka hor dhaawiciisa.
Previous articleMark Hughes oo ku booriyay Manchester United inay heshiis cusub u gacan geliso Edinson Cavani
Next articleReal Madrid oo 2-0 uga badisay Getafe Kulan ka tirsan Horyaalka La-Liga